मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेका लागि आयो नयाँ नियम ! - Sabal Post
मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेका लागि आयो नयाँ नियम !
काठमाडौं – मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले पनि हेल्मेट लगाउनुपर्ने गरी नयाँ नियम ल्याउन लागेको प्रहरीले जनाएको छ । आइतबार महाशाखाका पत्रकार सम्मेलन गर्दै ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एसएसपी वसन्त पन्तले यो कुरा बताएका हुन्। मोटरसाइकलमा सवारी गर्ने दुबै जनाले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर चिन्ह प्राप्त हेल्मेट हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
यसबाट चालकले लाइन बसेर बैंकमा भौचर भरेर रकम तिर्नु पर्ने समस्या समाधान हुने बताइएको छ। त्यसैगरी इ–चलानीमार्फत नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई चिट थमाइने पनि एसएसपी पन्तले बताए। यसमा प्रहरीले कागजको प्रयोज बिना कप्युटर प्रविधिमार्फत् चिट काट्ने छ।
त्यस्तै ट्राफिक लाइट थप गर्न र व्यवस्थापन गर्ने, उपत्यकाका सम्पूर्ण ठाउँमा पिक एण्ड ड्रपको व्यवस्थापन गर्ने, करिडोरहरु सञ्चालन गर्ने योजना ट्राफिकको रहेको उनले बताए। साना सवारीलाई उपत्यकाबाट विस्थापन गर्न पनि ट्राफिकले भूमिका खेल्ने र सवारीमा ड्रेस कोडको व्यवस्थापन गर्ने योजना ट्राफिकको रहेको बताइएको छ।
अन्तत : सियारी गाउँपालिका बोल्यो – ‘बिना…
महिलाले चाहेको खण्डमा पुरुषसरह जे पनि गर्नसक्छन्…
“भ्यानेन्टाइनडे“ के हो ?